Shiinaha AvalonMiner 1047 warshad iyo soosaarayaasha | Tianqi
Daawaha: 37TH / s ， 0% ~ + 3%
Isticmaalka Awoodda: 62.5J / T, -5% ~ + 5% @ 25 ℃
Waxtarka Awoodda: 2380W, -5% ~ + 8% @ Wall-Xadhig
Damaanad-qaadkani wuxuu daboolayaa alaabooyinka Kenean Hal-abuurnimada CO., LTD ("Canaan").
Kanaan wuxuu amrayaa badeecadaha la soo iibsaday inay ka xor yihiin dhammaan cilladaha ku jira maaddada, waxqabadka iyo shaqaynta muddo 180 maalmood ah alaabooyinka laga soo bilaabo taariikhda keenista. Dammaanadani waxay ku egtahay iibsadaha asalka ah (iyo iibsade kasta oo isku xiga inta lagu jiro muddada damaanadda). Muddada damaanadkan gudaheeda, Kancaan waxay dayactiri doontaa ama beddeli doontaa, bilaash, qayb kasta oo la caddeeyey inay cillad ku jirto maaddada, waxqabadka ama shaqaynta, laakiin dakhliga ka soo gala macdanta magdhow lama siin doono. Waad la shaqeyn kartaa Kanaan ka dib injineerada iibka ee internetka si aad u ogaato qaybaha cilladaha leh, ka dib waxaan si toos ah kuugu soo diri karnaa qaybaha beddelka adoo adeegsanaya shirkadaha xawaaraha. Xaaladdan oo kale, Kancaan ayaa bixin doonta kharashka dhoofinta ee alaabada la beddelayo. Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad ku soo celiso mashiinnada cillada leh Kancaan. Xaaladdan oo kale, Iibsadayaashu waxay bixiyaan dhoofinta gudaha waxaana bixin doonaa dhoofinta soo celinta. Fadlan la soco inaanan masuul ka ahayn wixii khasaaro ah ee ka yimaada dib u dhaca kastamka, qasaaraha ama qarashka. Dammaanaddaan kor ku xusan ma khusayso wax kharash ah, dayactirro ah, ama adeegyo ah oo ay keeneen isticmaal kasta oo aan ahayn adeegsiga caadiga ah, ama waxyeello ka timaadda kororka hadda, burburka biyaha, xadgudubka, shilalka, dabka, daadadka, xad-dhaafka, beddelaadda aan la oggolayn, ama rakibidda aan habboonayn ama u adeegso alaabooyinka uusan oggolaan ama uusan farayn Iibiyaha. “Xirxirid xad dhaaf ah” macnaheedu waa kordhinta gacanta ee xawaaraha processor-ka, mana kujirto xawaaraha turbo ee uu bilaabay processor-ka laftiisa sida uu u qaabeeyay Avalon.
Hore: AvalonMiner 1026
Xiga: AvalonMiner 1066
Hashrate 37TH / s, 0% ~ + 3%
Isticmaalka Awooda 2380W, -5% ~ + 8% @ Wall-Plug
Waxtarka Awooda 62.5J / T, -5% ~ + 5% @ 25 ℃
Qaboojinta 2 x 12038 FAN
Heerkulka Hawlgalka-5 ℃ ~ 35 ℃
Nosie70dB （Caadiga ah）
Qiyaasaha Net 190mm x 190mm x 292mm
Miisaanka Net 8.0kg
Isugeynta Guud 405mm x 305mm x 305mm
Miisaanka Guud 9.1kg
weelka bitmain, weelka antminer-ka, loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto", crypto macdanta asic, weelka btc, weelka antbox,